Ungawabeka kuphi amakhamera we-IP ezokuphepha?
Njengoba unamakhamera we-IP ezokuphepha, ungacabanga ukuthi ikhaya lakho liphephe. Kepha wake wacabanga ukuthi ungahle ubeke amakhamera akho ezindaweni ezingalungile lapho m ...
Njengoba uneAmakhamera we-IP ezokuphepha, ungacabanga ukuthi ikhaya lakho liphephe. Kepha wake wacabanga ukuthi ungahle ubeke amakhamera akho ezindaweni ezingalungile lapho kungahle kungabi khona ukukhetha okuhle kakhulu ukuze ngiwabeke. Uma uthenga amakhamera we-IP ukubhekwa kwasekhaya, kufanele ufune ukuwasebenzisa ukuqapha indlu yakho enkulu ngangokunokwenzeka futhi ubheke izindawo lapho amasela angathatha khona njengomnyango. Nawa amanye amathiphu wakho.
1. Ukungena Okusemqoka
Cabanga ukuthi wawungumgqekezi, ubuzohlola kuphi kuqala? Ungahle uhlole uMat owemukelwa, othile uvame ukubeka okhiye bawo ngaphansi kwawo. Futhi-ke ukungqongqoza okumbalwa emnyango ongaphambili kuzokwembula uma kuhlala uma kwenzeka futhi uma kunenja ezakhiweni. Uku-oda kwizibalo kunama-45% ama-burglars asebenzisa le ndlela ukuze angenele ukungena. Ngakho-ke kungcono ubeke amakhamera wakho we-IP phambi kokufakwa kwakho okuyinhloko kufaka umnyango wakho wangaphambili nomnyango wangemuva. Futhi futhi ungabekaAmakhamera we-IP Ngaphakathi endlini yakho ukubhekana nomnyango wangaphambili nomnyango wangemuva.
2. Amawindi okuqala phansi
Amafasitela okuqala aphansi nawo athandwa ngama-burglars. Ngakho-ke ungabeka ikhamera ye-IP ngqo ebheke ngqo ngewindi. Ngemuva kwalokho ungathola umbono ocacile wayo. Futhi kufanele uzame ezinye izikhathi ukuthola i-angle enhle kakhulu. Kufanele wazi ukukhanya kakhulu emuva akukuhle ukuthola ubuso buka-burglar.
Kufanele ucabange ngezindlela eziphambili eceleni kwamawindi okuqala phansi. Lezi zindlela zingase indlela eya emakamelweni agcina izinto ezibalulekile. Izikhundla zokubeka amakhamera lapha zibaluleke kakhulu. Cabanga kaningi, thola i-angle engabamba ubuso buka-burglar.
Omunye uvame ukushiya izinto zawo emotweni. Ngakho-ke igalari nayo ibalulekile ekuqapheleni. Futhi enye igalaji ingangena emakamelweni abo. Kuya ngesimo sakho.
5. Igceke langaphambili
Uma ama-burglars ethola kunamakhamera egcekeni lakho langaphambili, kungenzeka angafuni ukuza ukuzovakashela indlu yakho.
6. Igumbi le-Master
Ngicabanga ukuthi akusona isidingo sokuthi ngikutshele ukuthi kungani. Ngoba le yindawo lapho ubeka khona okuyigugu lakho. Beka ikhamera ye-IP lapha, ungazi ukuthi yiziphi izinto ezebiwe.
Kulezi zinsuku kunezinhlobo eziningi kangaka zamakhamera we-IP ongazikhetha. Izinto zincike lapho ubeka khona amakhamera we-IP. Uma ubafaka endaweni emnyama, lezoAmakhamera we-IP ngombono wobusuku Umsebenzi kungenzeka ube yisinqumo sakho esihle kakhulu. Isibonelo, igalaji livame ukuba mnyama lapho kungekho muntu lapho. Uma ubabeka ngaphandle, ungakhethaAmakhamera we-IP ane-materproof sebenza. Uma wena nemindeni yakho zisebenza ngesikhathi sosuku. Labo abasebenza ngokutholwa kokutholwa kungenzeka bakulungele.
PHAMBI I-China High-Tech Fair 2016
Ungawavimbela Kanjani I-IP Camera Hackers OLANDELAYO